50 Horror Mafirimu Ekutarisa paTubi
musha Horror Varaidzo Nhau 50 Horror Mafirimu Ekutarisa paTubi
by Brianna Spieldenner April 1, 2020 26,512 maonero
Neanenge munhu wese ari kugara pamba mazuva ano, nzvimbo dzekushambadzira dziri kuwana kurovedzwa kusingatarisirwe. Vanhu vazhinji vanga vachidirana kuNetflix, Amazon Prime, uye Hulu kumirira kugara kwavo voga. Iyo yekushambadzira sevhisi Tubi, zvisinei, inoita kunge isiri kuwana yakawanda mwenje, kunyangwe iri yemahara zvachose. Kana iwe uine imwe nguva yemahara pamaoko ako (izvo zvatinoita tese), tora nguva yekuona makumi mashanu mafirimu anotyisa paTubi izvozvi!
Mumwe anogona kufunga kuti sezvo iri yemahara yekushambadzira sevhisi, ivo havazove neakanaka katarogu yavanosarudza kubva, asi izvo hazvisizvo zvazviri matani emafirimu makuru anotyisa ekuona paTubi. Ini ndakaronga mafirimu aya muzvikamu zvishanu: echinyakare anotyisa mafirimu, anosemesa uye anotyisa anotyisa mafirimu, ekunze anotyisa mafirimu, anoshamisa kutyisa uye anotyisa ma comedies, uye akawana mafirimu anotyisa mafirimu. Saka, verenga pazasi kuti utarise akanakisa mafirimu anotyisa ekuona paTubi!
Classic Horror Mafirimu paTubi
Iyo Texas Chain Yakaona Kuuraya (1974): Tobe Hooper nyaya inosemesa yeanodya nyama yeSawyer Mhuri, achirova kuburikidza neTexas mumwe wechidiki panguva!
Hellraiser (1987): Iwo ma80s aipenga, iyi bhaisikopo inopenga. Bhokisi repakati repakati, zombie isina ganda, BDSM, madhimoni akapfeka zvakanaka, nemabhaketi eropa. Iyi bhaisikopo ine zvese.
Suspiria (1977): Imwe yeanonyanya kuzivikanwa mafirimu eGiallo anotungamirwa nengano Dario Argento. Iyi flick ine mavara anoteera musikana weAmerica anonyoresa mune inozivikanwa yeGerman dance academy muchivande inomhanya nevaroyi.
Zuva revafi (1985): Iyi inoteedzerwa yekutevera kune George Romero's Husiku uye Kwayedza yevakafa. Boka remasayendisiti nemauto anonamira mukati mevhu repasi pevhu sezvo zombie apocalypse inovatyisidzira pamusoro.
Carnival yeMweya (1962): Iyo isingakosheswe firimu dema uye chena uko zvisingawanzo kuitika zvinotanga kuitika kune mukadzi zvichitevera tsaona yemotokari tsaona.
Killer Klown Kubva kuOuter Space (1988): Iyi quirky inotyisa bhaisikopo ine vatorwa vazvishandura kunge maclown anotyisidzira guta reAmerica.
Kurara Camp (1983): Iyi kamu yezhizha yaenda slasher ndiyo tsananguro yekambasi, ine magumo iwe yauchayeuka.
Rabhi (1977): David Cronenberg ane hunyanzvi uye anoita bonde zombie bhaisikopo. Mukadzi wechidiki anokura zvisina kujairika zvinoita kuti ade ropa mushure mekuvhiyiwa zvakanyanya zvichitevera tsaona yemudhudhudhu.
Ginger Snaps (2000): Iyi yevakadzi inouya-ye-zera firimu ndiyo ingangove inozorodza yewwolf bhaisikopo iwe yauchamboona Iyo gory inoshanda mhedzisiro yakanyanya kunaka.
The Slumber Party Kuuraya (1982): Akashatirwa wekuboora-anoshandisa maniac anokanganisa mutambo wekurara pabonde mune ino firimu reaslasher. Izvo zvinoitawo zvakanaka zvishoma zvekugwinyisa iyo slasher genre munzira dzakanaka pamberi penguva yayo.